Ny fampielezan-kevitra lainga amin'ny media manodidina an'i Venezuela: Martin Vrijland
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 5 Febroary 2019	• 8 Comments
Mbola misy foko iray manontolo izay mijery ny vaovao NOS ary tsy manontany ny fahamarinan'ity vaovao ity. Ny fampielezan-kevitra dia lasa mihabetsaka kokoa ny zaza kambana ary dia - araka izay azonao atao - dia mora ny manasokajy. Na dia izany aza, ny fampahalalam-baovao mahazatra dia miantehitra amin'ny zava-misy fa ny vaovao sandoka sy ny fampielezan-tserasera Rosiana sandoka dia niantoka fa naverina ny fitokisana.
Marina ny marina: ny ankamaroan'ny olona dia tsy nanontany mihitsy ny vaovao. Mipetraka fotsiny ianao amin'ny hariva ary avy eo dia mihaino izay mitranga eto amin'izao tontolo izao. Eny e. Eo am-pijerena sarin-javatra iray tanteraka momba ny zava-miseho eto amin'izao tontolo izao ianao. Sary iray izay tsy maintsy miantoka fa ny fanapahan-kevitra ara-politika dia tafahoatra sy mora alamina amin'ny vahoaka, ka ny rehetra dia mifanaraka amin'ny fanapahan-kevitra. Mazava ho azy ihany koa isika manana ny tsirony ny havia sy havanana, maitso, liberaly sy voafehy mpanohitra, nefa dia foana ny mody ny demokrasia. Ny lohahevitra Venezoela kely misy isalasalana fa ny firenena manaraka ao amin'ny lisitry ny firenena imperialista no niandraikitra ny US.
Ny lahatsary etsy ambany dia faran'izay tsotra ihany fa ny halaviranao dia mankany amin'ny valanorano. Mampahatsiahy ny vaovao ho an'ny tanora NOS izany; Fantatrareo ireo ankizy ny fandaharana doha sekoly fanabeazana fototra hita ao, ka ny ankizy no baikoina amin'ny fampielezan-kevitra sary 'izao tontolo izao. Manomboka aloha ny fantsona atidoha. Raha ny marina, dia tena manontany tena raha mbola ilaina ny mandinika ireo sarimihetsika, fa angamba no tena ilaina, satria ny mpanao toa manana ny zava-nitranga fa toy izany bleating lainga tonga any izany ho toy ny tapa-mofo sy izay tsy hampandrosoana ny tantara kitro Zavatra tsy ampy / fanononana X-SAMPA tsy ampy, tsy nisy teny manokana voalaza
Ny zavatra tokana izay mifanaraka amin'ilay lahatsary etsy ambany dia ny hoe Venezoela no faritra faran'izay mahavelona ao amin'ny faritra. Ny firenena dia niezaka ny hijanona ivelan'ny fandefasan'i Etazonia nandritra ny taona maro. Ny Royal Dutch Shell dia maniry ny handray ny solika avy amin'ny PDVSA (orinasan-tsolika Venezoelana). Tao no nanoratako tao amin'ny 2017 ity lahatsoratra ity ny, izay nampahafantatra ihany koa fa ny rivo-doza avy eo amin'ny St. Maarten maintsy hanaovany azy sy ny dingana lehibe angamba menaka tahirin ao Venezoela "nanao soa aman-tsara" avy amin'ny tafika an-dranomasina holandey ambanin'ny mody diso ny rivo-doza. Ny sarimihetsika NOS hitanao eto dia manazava ny fahadisoan'ny krizy any Venezoela ao anatin'ny krizy iray tampoka ao amin'ny firenena, saingy tsy manazava ny antony. Mazava ho azy, izany no mahatonga ny lainga ho misintaka ny firenena mandritra ny taona maro. Taloha, nitranga izany rehefa nisy ny tanàna iray natao fahirano ary nakatona ny làlana rehetra ahafahana manolotra sakafo. Rehefa manomboka mangetaheta ny mponina, manomboka mikomy izy ireo ary mangataka ny hanolotra ny fahavalo. Miandry ny miaramila hanomboka hikomy izy ireo. Ny fotoana vaovao amin'ny aterineto sy ny tambajotra sosialy dia mahatonga azy ireo ho mora ihany koa hanombohana ny korontana avy ao anatiny.
Juan Guaidó, filohan'ilay parlemanta Venezoeliana izay neken'ny firenena ao amin'ny Firenena Mikambana ho filoham-pirenena lefitra omaly, dia mazava ho azy fa tandindon'ny tandrefana. Ny fanontaniana raha hamaritra mandritra ny fotoana lava i Maduro dia ny tena zava-tsarotra indrindra. Mbola hanohy ny fifidianana ve ny tafika? Inona no hataon'i Rosia, Torkia ary indrindra an'i Shina? Nampiasa vola an'arivony maro i Sinoa tao amin'ny toekarena Venezoeliana ary niaraka tamin'ny fanaraha-maso tandrefana fa efa lasa fotsiny ny vola. Zerohedge.com nitatitra ny haben'ireo fampiasam-bola ireo andro roa lasa izay:
Roa ambin'ny folo taona, ary mihoatra ny $ 50 lavitrisa amin'ny fampindramam-bola taty aoriana, dia nisy krizy ara-politika ao Venezoela dia nandrahona Shina payout sy ny mpitan-Beijing an-taratasy fanomezam-pahefana fifanandrinana miantana araka ny manohana ny mpitarika Venezoelana ny Etazonia no tanjona amin'ny fanilihana. Fifandonana miaraka amin'ny Washington fa i Beijing dia afaka manao izany tsy misy, ao anatin'ny ezaka atao amin'ny famahana ny fifandirana ara-barotra izay mandanjalanja eo amin'ny toekarena Shinoa.
Noho izany, betsaka kokoa ny resaka miresaka momba an'i Venezoela noho ny fifidianana izay tsy demokratika. Izy io dia mikasika ny vola sy ny blaogy Amerikana sy ny mpiara-dia aminy manoloana an'i Shina, Rosia ary Torkia, miaraka amin'i Shina ho mpandray anjara lehibe indrindra. Ny vintana mety hahatratrarana ny fiovan'ny fitondrana tahaka izao amin'ny 2014 ao Okraina ny vintana izay azon'ny Alliance Western Alliance, noho izany dia toa kely. Raha mahazo fanohanana ara-miaramila avy ao amin'ny ekipa Shina, Rosia, Torkia i Maduro, dia mety ho ady lehibe kokoa izany. Raha ny fijery, ny toe-karena Amerikana dia tsy ho ela eo, ary dia tena efa OTAN fiarahan'ny in tatters (nomena ny ady eo amin'ny tafika roa lehibe indrindra ao amin'ny fifanekena, izany hoe ny Etazonia sy Torkia), ary hita tany Eoropa ny olana loatra fa Tokony ho zazakely. Raha lavo ny empira amerikana lehibe ary mitabataba ny fifamatoran'ny OTAN, midika izany ny faran'ny Trump. Izany dia famongorana voajanahary ofisialin'ny Amerikana, izay ananako lahatsoratra teo aloha efa voafaritra. Noho izany dia heveriko fa tsy tokony hojerentsika loatra ny fampielezan-kevitra ao amin'ny haino aman-jery ary tsy afaka manantena an'i Maduro haka haingana.
Toa efa antomotra ny ady an-trano. Azonao atao ny manolo ny teny hoe 'olom-pirenena' miaraka amin'ny 'fidiran'ny tafika any amin'ny Tandrefana'. Isika dia mety handeha hahita Okraina-toy ny soritr'aretina, izay, ohatra tandrefana mpikarama an'ady akanjo handeha hitifitra maranitra Venezoeliana mpanao fihetsiketsehana am-pilaminana miaramila amin'ny (na zavatra mitovy amin'izany). Io sary propagandista io dia tokony handresy lahatra ny vahoaka hanao fepetra miaramila. Mbola tsy nianatra zavatra avy amin'ny fomba fampielezan-kevitr'ireo haino aman-jery ireo vahoaka betsaka miaraka amin'ny sampan-tserasera (tahaka ny CIA). Izany dia tsy voavaha ao anatin'ny herinandro vitsivitsy, fa mety ho lava-nihazakazaka ady amin'ny mety ho vokany tsara Maduro ho toy ny fahalavoan 'ny dolara teo aloha mba ho azo antoka fa ny Amerikana nitsotsotra fanjakany.
Fiovan'ny fitondrana ao Venezoela eo ambany fitarihan'ny US taorian'ny mosarena
Aruba, Bonaire, Curaçao? Miomàna hiady amin'ny ady nataon'ny Etazonia miaraka amin'ireo nosy ABC toy ny ivontoerana
Venezoelà no ohatra mikasika ny zavatra miandry antsika sy Eoropa ary ny fampidirana ny vidin-tsolika ho toy ny fenitra iraisam-pirenena
Satria mamoaka solika eo amin'ny afo i Korea Atsimo, i Jerosalema sy Venezoelà, manapaka ny atsinanana
Tags: ady an-trano, Featured, Juan Guaido, Maduro, menaka, Shell, Venezoela, fifidianana
5 Febroary 2019 ao amin'ny 16: 06
5 Febroary 2019 ao amin'ny 16: 12
Iza no efa nanan-trosa tany Etazonia indray? Ny tresaka voalohany ao amin'ny fikambanan'ny OTAN dia efa hita ...
Walrus Bolton no mandinika azy io indray ... 😀
5 Febroary 2019 ao amin'ny 19: 59
Any amin'ny firenena rehetra dia misy mpitarika manaraka ny fandaharam-potoana goavana. Toy izany foana ary raha mifanaraka aminao izany, dia hiverina indray ny zava-drehetra. Ireo rehetra eo ambanin'ny fanevatevana ny fivavahana, ny safidy politika na ny fiaviana. Na aiza na aiza dia hitantsika i Blok mivarotra fifampiresahana tsara. Ny tantara mitovy amin'ny fomba hafa, ny tahotra ary ny antoko hafa dia tsy mahalala ny zavatra ataon'izy ireo. Izany rehetra izany dia andriamanitra (volamena, solika ary zava-mahadomelina).
5 Febroary 2019 ao amin'ny 21: 11
Jereo fa ny fanehoan-kevitra nataoko tamin'ity tolakandro ity dia tsy mbola niaraka taminao. Aza manahy ny mahazatra mahazatra, aiza ny fahalalahana miteny?
Mamerimberina ny fanovàna ny fitondrana aho omaly fa tsy ny zon'olombelona amin'izao fotoana izao ary ireo olona ahiahina mahazatra no manome anao toerana sy asa ao amin'ny toeram-pitrandrahana. Tsara ho an'ny fanetren-tena. Nasty olona.
6 Febroary 2019 ao amin'ny 02: 07
Vaovao misimisy momba an'i Venezoelà:
12 Febroary 2019 ao amin'ny 17: 11
Avy any amin'ny boky OTPOR.
Tamin'ny oktobra 5, 2005, niaraka tamin'ny lazan'i Chávez sy ny fandrindrana ny governemanta nandresy fandaharana sosialista, dia tonga tao Belgrade, Serbia ny dimy "mpitarika mpianatra" Venezoeliana mba hanomboka hampiofanana amin'ny fikomiana.
Tonga avy any Venezoelà ny mpianatra avy amin'ny Centre Action for Action and Strategies tsy misy herisetra, na CANVAS. Ity vondrona ity dia vola be indrindra amin'ny alàlan'ny Didy Nasionaly ho an'ny Demaokrasia, fikajiana CIA izay miasa ho fitaovan'ny governemanta Amerikana amin'ny fampiroboroboana ny fanovàna ny fitondrana; ary nivadika tahaka ny Ivotoerana Iraisam-pirenena misahana ny Repoblika ary ny Ivon-toerana nasionaly demokratika ho an'ny raharaha iraisam-pirenena. Araka ny voalazan'ny mailaka nalefan'i Stratfor, orinasam-pitsikilovana fantatra amin'ny anarana hoe "aloka CIA", CANVAS dia mety nahazo ny famatsiam-bola sy fiofanana CIA nandritra ny tolona 1999 / 2000 anti-Milosevic. "
CANVAS dia spinof na Otpor, vondrona mpanohitra serba napetraky an'i Srdja Popovic ao amin'ny 1998 ao amin'ny Oniversiten'i Belgrade. Otpor, izay midika hoe "fanoherana" amin'ny teny serba, dia ny tarika mpianatra izay nahazo laza iraisam-pirenena - ary ny fampiroboroboana ny Hollywood - tamin'ny fanentanana ny hetsi-panoherana izay nopotehan'i Slobodan Milosevic.
Ity tranokala kely momba ny fanovàna ny fitondra-miaramila ity dia niasa araka ny tantaran'i Gene Sharp, ilay antsoina hoe "Clausewitz na tolona tsy misy herisetra." Niara-niasa tamin'ny mpandalina ny sampana misahana ny fiarovana an-tampony i Sharp, Col. Robert Helvey, hamorona rafitra stratejika iray izay hetsi-panoherana fitaovam-piadiana ho toy ny endrika ady ady, ny fitondran'i Washington tsy manan-kialofana.
12 Febroary 2019 ao amin'ny 17: 29
Jereo ange! Efa mazava tsara fa io fomba fitsapana io dia teo ambadik'izany, saingy mbola voamarina mazava tsara izany.
"Tsia, ity dia tao amin'ny lehilahy 2005" .. oh ary avy eo dia tampoka izy ireo? Tsia, mazava ho azy fa tsy. Maduro no mpandimby an'i Chavez ... izay tsy maintsy miala.
15 Febroary 2019 ao amin'ny 18: 28
Ny olona tompon'andraikitra amin'ny fiovan'ny fitondrana dia i Abrams, mpitsikilo mpiady 1e (voaheloka) mijery ny asany any Guatemala / El Salvador (Iran-Contra)
« Manana iray hafa isika: ny Holandey niova ho Islam, mpanao politika PVV (AIVD-er) Joram van Klaveren
Minisitry ny Belzika Joke Schauvliege dia nametra-pialana taorian'ny confession mikasika ny fametrahana fihetsiketsehana amin'ny alàlan'ny sekretera miafina »
Total visits: 8.549.131